एमालेले गठन गर्यो ९ वटा विभाग, कसलाई कुनको जिम्मेवारी ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमालेले गठन गर्यो ९ वटा विभाग, कसलाई कुनको जिम्मेवारी ?
विधान अधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेकपा एमालेले पार्टीका नौं वटा विभागहरु गठन गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सोमबार बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले पार्टीका विभिन्न नौं वटा विभागहरु गठन गरेको हो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पर्यटन प्रवद्र्धन विभाग प्रमुखमा भानुभक्त ढकाल, आर्थिक विभाग प्रमुखमा विष्णु रिमाल, स्थानीय तह विभाग प्रमुखमा देवेन्द्र दाहाललाई मनोनित गरिएको बताए । विभागलाई पूर्णता दिन सदस्यहरुको मनोनित गर्ने काम भने बाँकि रहेको एमालेले जनाएको छ ।
एमालेले आगामी साउन २४ गते केन्द्रिय समिति बैठक बोलाएको छ । पार्टीको आगामी भदौ २७ र २८ गते आयोजना हुने विधान अधिवेशनामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावबारे छलफल गर्न केन्द्रिय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यसको २ दिनअघि साउन २२ गते पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अनौपचारिक छलफल गर्ने पनि निर्णय पनि एमालेले गरेको छ ।